Ganacsato Soomaali ah oo si fool xun loogu dilay Nairobi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ganacsato Soomaali ah oo si fool xun loogu dilay Nairobi
Mareeg.com: Meydadka 3 ganacsato Soomaali ah ayaa laga helay goob lagu keydiyo meydadka oo ku taalla magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Maxamuud Cabdi Maxamuud oo ka mid ah meydadka la helay ayaa niman isku sheegay in ay ka tirsan yihiin laanta dambi barista Kenya ee CID waxay shorw todobaad ka hor ka kaxaysteen goobtiisii ganacsi oo ku taalla xaafadda Islii.
Labada qof oo kale ayaan weli la aqoonsan, kuwaas oo meydkoodu yaallo isla goobta kaydinta meydadka ee Nairobi.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii, Yuusuf Xasan Cabdi ayaa sheegay in saddexda ninba lagu dilay ceejin, kaddib markii laga dhacay hanti u taallay bankiyo ku yaalla Nairobi.
Xildhibaanka ayaa arrinta ku tilmaamay wax laga xumaado, wuxuuna ka codsaday dowladda Kenya in ay samayso baaritaan deg-deg ah oo lagu aqoonsanayo cidda ka dambeysey dilka saddexda qof, si loo maxkamadeeyo.
Ganacsadaha meydkiisa la gartay ayaa kazoo jeeda Soomaalida dalka Kenya, gaar ahaan degmada Wajeer ee gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Falkaan ayaa naxdin hor leh ku noqday Soomaalida kala duwan ee ku ganacsatada Kenya, iyagoo sheegay in arrintaan kooxaha burcadda ah ku dhiiradeen kadib markii dowladda Kenya olole amaan ku qaadday Soomaalida dalkaas ku nool.
Alshabaab oo sheegay iney Muqdisho ku qabteen tartan Qur’aan (Yaa ka hadlay?)